မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းကူညီမည့် တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များအားလုံးအား ကိုအောင်စိုးမိုး(၀ါဝါ၀င်း စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်) မှ စက်သုံးဆီများလှူဒါန်းကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းသိရပါတယ်။ ~ Myaylatt Daily.
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းကူညီမည့် တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များအားလုံးအား ကိုအောင်စိုးမိုး(၀ါဝါ၀င်း စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်) မှ စက်သုံးဆီများလှူဒါန်းကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းသိရပါတယ်။
9:12 PM သတင်း No comments
Ko Aung KyawKyaw မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ကွန်တော်တို့ ပွင့်ဖြူမှာ အခြေနေတွေဆိုးနေတယ်ဗျာ
ဧရာဝတီ မြစ်ရေ ရေဘးသင့်ပြည်သူများနှင့်ကျွဲနွား တိရစ...
ကံမမြို့နယ်တွင် မင်းတုန်းချောင်းရေ ရေလျှံမှုဖြစ်ပွား
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက်...
ပွင့်ဖြူရေဘေး ဒုက္ခသည်တို့ကို သွားရောက်လှူဒါန်းရန် ...
လပြည့်နေ့ကုသိုလ်ယူလိုက်ပါအုန်းမယ် .... ကာဘိုးဆယ...
ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အောင်လံအနိမ့်ပ...
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ မှ ပရဟိတ အဖွဲ့ များ စေတုတ္ထရာ...
ငဖဲမြို့နယ် အိမ်ထောင်စု(၃၀)ခန့် ရေလွှတ်ရာသို့ ပြော...
ဖွင့်ပွဲတုန်းက သုံးတဲ့ ရဟတ်ယာဉ် တွေ မသုံးကြဘူးလား ...
မုန်းချောင်းရေတက်နေမှု အခြေအနေ 31.7.2015
မကွေးတိုင်းအတွင်း မုန်းချောင်းနှင့်မန်းချောင်း ရြေ...
ပွင့်ဖြူရေ ကျောင်းသားတွေ မင်းဘူးရောက်ပြီ လာနေပြီ
၃၀ ၇ ၂၀၁၅ငဖဲ ရင့်ရှည်တမံ ၆၀၄-၇ပေ တမံဘောင်ရောက်ရန် ...
မုန်းတမံ၏ အခြေအနေမှာ ယနေ့နေ့လည် ၁၂နာရီတွင် ဆည်ရေမှ...
မုန်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး ဝင်ေ...
စလင်းတမံ ရေပြည့်ရန် ၂ပေခွဲသာလို
မဲဇလီရေလွှဲဆည်ကတော့ ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ အခြေအနေကောင်းတယ...
မုန်း vs ကြီးအုံကြီးဝ
ရွှေကျင်မြို့တွင် ရွှေကျင်မြစ်၏ စိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက် ...
ကလေးမြို့နယ်တွင် စံချိန်တင် ရေကြီး၊ ရေဆက်တိုးနေ၍ေ...
ဆည်များ၏ ရေပိုလွှဲများမှ ရေလျှံ၍ စေတုတ္တရာ၊ ပွင့်ဖြူ...
စက်ရုံကို ရပ်လိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ထွက်ပြေးတယ်...
ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင်းခြံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ...
ကောလင်းရေဘေးကူညီသော အဖွဲ့များ ဆင်ခြင်ကြစေချင်..(ဟာ...
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၁၅ ရပ်ကွက်၊ ဝန်ထမ်းကြီး အ...
အခုမြင်ရတဲ့ တံတားကတော့ မန်းချောင်းကိုဖြတ်ထိုးထားတဲ...
၃၀.၇.၂၀၁၅ *အောက်စက်တော်ရာ* ယနေ့ ဖူးမျှော်ရသည့် မြင...
ကလေးမြို့ရဲ့ ရာဇဂြိုလ် ဆည် က အခြေ အနေ ပါ။
ငဖဲတံတားတော့ရေထဲပါသွားပြီ ပွင့်ဖြူ မြို့နယ် ဘယ်နှစ...
ပွင့်ဖြူမြို့အခြေအနေ! အရေးပေါ်ကြေညာ ၃၁-၇-၂၀၁၅
.ပြ ည် သူ့ ထံမှောက် အ လ င်း ၀ င်ရောက် လာ...
မုန်းချောင်းတမံထိပ်မျက်နှာပြင်နဲ့ ၇ ပေ အကွာရေ ရောက...
ရွှေစက်တော်မှာ ရေကြီးရေလျှံနေတဲ့ ဒီကနေ့ညနေ ၄နာရီအြေ...
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှ မုန်းချောင်းဘေးရှိ ကျေးရွ...
ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်လည်း သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ဟု ဦးသိန်းစိန...
ပွင့်ဖြူမှာ မုန်းချောင်းရေ ဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင...
မင်းဘူးမြို့နယ် လက်ပတောကျေးရွာ ရေဘေး ရေလယ်ကျွန်းဆိ...
ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို ဆက်လက်ကူညီရန် မင်းဘူး/စကုမြိ...
မကွေးမြို့ ရွာသစ်ရပ် အ.ထ.က.၂ လမ်းမှာကျောင်းသွားကျေ...
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများဖြင့် အကျဉ်း/အကျဉ်းသူ ...
စေတုတ္တရာမုန်းတမံ နံနက် ၇း၀၇ အခြေအနေ
အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး စောင့်ရှောက်သင့်ပြီ မိုးေ...
ငဖဲလူငယ်ကွန်ရက်သို့်တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းလိုပါက အော...
၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစတွင်သရက် မြို့နယ်စည်ပင် သာယာ...
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မုန်တိုင်း စတင်ဝင်ရောက်၊ အဆောက်အ...
စေတုတ္တရာမြို့နယ် မုန်းချောင်းတမံ၏ ၂၈.၇.၂၀၁၅ရက်(21:...
သရက်- အောင်လံကူး -ရွှေပြည်သစ် ကူးတို့လိုင်း ပဲ့ထော...
အကျဉ်းသား ၆၉၀၀ ကျော်အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမ...
တရားမ၀င် ပြည်ပသို့ ပို့ဆောင်ပေးသူကို အရေးယူ
မန်းရွှေစက်တော်ရာဘုရား ပါဒအောက်စက်တော်ရာ ခြေတော်ရြာ...
သရက်မြို့ ရဲ့ ကမ်းနားလမ်း ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်မှုအခြေအနေ
*ကျွန်တော်ယူထားသော တာဝန်တစ်ခု* ပါရမီရှင် သာသန အကျိ...
EMG ၏ CEO အား လုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင်သောကြောင့် ဖမ်းဆီ...
ငဖဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ မန်းချောင်းရေ မြင့်တက်လာသည်ကု...
တောင်တွင်း-နတ်မောက် ၂၈ မိုင်လမ်းတွင်မိုးတွင်းကာလအတ...
သရက်- မင်းလှ ကားလမ်းရှိရေကျော်များရေစီးဆင်း ကားမျာ...
သူရဦးရွှေမန်းကို ဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားမှု ဘယ်လိုတုံြ့...
သရက်-မင်းလှကားလမ်း သရက်မြို့ နယ် သရက်မြင့်ရေကျော်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA) အဖွဲ့ ကို ဇ...
မကွေးမြို့တွင် မိခင်နှင့်ကလေး အသေအပျောက်များကို နည...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA) ဒုတိယ အကြိမ...
ဒီလိုကာတွန်းမျိုးဖတ်ရတာ အမောလည်းပြေတယ် ခေတ်ကိုလည်း...
မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သဖြင့် လမ်းဖြတ်ကူးသူအား တိုက်မိ...
မကွေးမြို့ပေါ်တွင် ဟမ်းဆက်လိုက်လံရောင်းချနေသူအား စစ...
မိုးကြိုးလျှပ်ကွင်းထိမှန်ပြီး သားဖြစ်သူ ဒဏ်ရာရ မိခ...
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိသူများအား စစ်ေ...
ကလေးငယ်တစ်ဦး လယ်ရေသွင်းသော အင်းအတွင်း ရေဆင်းချိုး...
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ဂုံပင်ကျေးရွာရှိ ဂုံပင်ရွာဥ...
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူတဲ့အခါ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ အသ...
ရေဘေးသင့်ဒေသများ အပါအ၀င် ဒေသအများစု မိုးကောင်းမည်ဟ...
ဗဟိုကလဲ မအားလို့ မလာနိင်တာကြောင့် အစည်းအဝေးကို ရွေ...
မိုးလေ၀သ ကသတိပေးထားပါတယ် သတိရှိကြပါ
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA) မှ အသင်းဝင်သတင်း...
သတင်းသမားများ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း သတင်...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသတင်းစာဆရာအသင်း (ညီလာခံ)သို့ သတင...